अमेरिकाको ओरिगत राज्यकी ३२ वर्षे महिलालाई २१ वर्षको जेल सजाय भएको छ ।
३२ वर्षीया निथरलिन नामकी यी महिलालाई डे केयरमा राखिएका ७ जना बालबालिकालाई मेलाटोनिन औषधि खुवाएर आफू जिम खाना र शरीको छाला परिवर्तन गरी रातो कालो बनाउनका लागि बाहिर जाने गरेको आरोपमा उक्त जेल सजाए सुनाईएको हो ।
एनले आफ्नो घरमै ४ वर्षदेखि चलाउँदै आएको डे केयरमा राखिएका बच्चाहरुलाई झण्डै पाँच घण्टा बेहोसी अवस्थामा छोडेर बाहिर जाने गरेको आरोप लागेको छ । उनले बच्चाहरुका बाबु आमा तथा अन्य सदस्यलाई बिहाँन ११ देखि २ बजेसम्म बच्चा सुत्ने समय रहेकोले पिकअप गर्न वा हेर्न नआउन भन्ने गरेकी थिइन् ।
आफ्ना बच्चालाई स्कुल पठाउने र ती साना बालबच्चालाई निदाउने औषधि खुवाउने गरेको बताइएको छ । ती महिलाले अबैध रुपमा संचालन गर्दै आएको डे केयर पनि बन्द गरिएको छ ।
प्रहरीले उक्त डे केयरमा छापा मार्दा ति बच्चाहरुलाई अधिकतम तातो दूध खुवाउने गरिएको, विविध गैरकानुनी औषधि छरपस्ट छरिएको पाइएको थियो ।
यि महिलालाई ११ काउन्टको फस्ट डिग्री अपराधको अभियोगसहित अदालतले २१ वर्षका लागि जेल चलानका लागि आदेश दिएसँगै उनी जेल पुगेकी हुन । उनी जेलबाट निस्कदा ५३ वर्ष हुनेछिन् ।
स्मरण रहोस : अमेरिकामा आफूले बच्चा जिम्मा लिएको बच्चा उनीहरु १६ वर्ष नपुग्दा सम्म एक्लै छोड्न कानुनी रुपमा बर्जित रहेको छ । यदि बच्चाहरु एक्लै छोडेको पाइएमा प्रहरी वा ल इन्फोर्समेन्टले बच्चा एक्लै छोडेको पाइएका तीनका बाबुआमा, हेरचा गर्ने मानिस अपराधि ठहरिनेछन् ।
सामाजिक सञ्जालहरु आजकल धेरै युवायुवतीको मायाप्रेम गर्ने थलो बनेको छ…
सबै जना करोडपति बन्न चाहन्छन्। प्रत्येक व्यक्ति धेरै धन र सबै…
कुखुराको भाले आठ महिनापछि प्रहरी हिरासतबाट रिहा !
के तपाईलाई थाहा छ, पुजाआजामा चामलको प्रयोग किन गरिन्छ ?
कोरोनाबारे रुसी वैज्ञानिकको अनौठो अनुसन्धान, यसरी मार्न सकिन्छ भाइरस
के लामखुट्टले टोक्दा कोरोना सर्छ ? पहिलो पटक आयो यस्तो तथ्य